တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မေ ၁၄၊ ၂၀၁၉ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
နေပြည်တော်၊ မေ ၁၃
ခရီးသည်များထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိဘဲ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ဆောင် လေယာဉ်မှူးကြီးနှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်းများအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်
နန်းဦးစေတီတော်မြတ်ကြီး စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ ရွှေထီးတော်တင်လှူ ပူဇော်ပွဲ၊ လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ အာသောကစေတီတော် လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0